एउटा सुन्दर फारम अब अल्ला Borisovna Pugacheva छ के समाज मान्छे को जीवन को विवरण रुचि भएकाहरूलाई धेरै याद छ। केही मानिसहरू यस उनको विशेष मदत हासिल गर्न भनेर विश्वास kefir-ककडी आहार वजन लागि। यसको बारेमा प्रतिक्रियाहरू पहिले नै देखा छ, र हामी पनि यस लेखमा छलफल। र यसलाई वजन कसरी र कसरी यो बाहिर प्राप्त गर्न को यो अद्भुत विधि मेनु मा समावेश गरिएको छ के देखो।
यो के आहार आधारित?
दही र ताजा खीरे - वजन को यो विधि मात्र दुई उत्पादनहरु को प्रयोग मा आधारित छ। सार मा, यस मोनो-आहार। अन्य उत्पादनहरु प्रयोग यसलाई अत्यधिक खराब छ। निम्न छलफल गरिनेछ हुनत यो विविधता गर्न सम्भव छ रूपमा। दही र ककडी यो एक्सप्रेस आहार लागि किन चयन? यो कुरा तिनीहरूले क्यालोरी कम छन् भन्ने छ। पेट भर्नु, तिनीहरूले satiety बलियो भावना दिनुहोस्। तर धेरै केही क्यालोरी यस्तो kefir, ककडी आहार रूपमा विधि प्रयोग गरेर आपूर्ति। आहार एक प्रमुख विन्दु हो। आखिर, खाना को कम पोषण मूल्य, को छिटो हामी अतिरिक्त सेन्टिमिटर उन्मुक्ति। साथै, यी दुई उत्पादनहरु पूर्ण भएको intestines सफा छन्, यो उनको वजन को नियन्त्रणमा ठूलो महत्व पनि छ।
यो ककडी र दही को कुनै पनि पकवान को सोच्न गाह्रो छ। दृष्टिकोण, सायद यी उत्पादनहरु को एक मिश्रण। यो यति बनाउन: राम्रो grater एक सानो ताजा ककडी मा rubbed, 1% दही एक गिलास थप, एक सानो हरियो (वैकल्पिक) र सबै मार ब्लेंडर। दिन को लागि यो ककटेल आवश्यकता, तीन पटक, प्रत्येक समय उत्पादनहरु whisking नयाँ ब्याच पिउन। तपाईं बस एक दिनमा खान सक्नुहुन्छ ताजा खीरे को 1 किलो र कम बोसो दही को 1.5 लिटर पिउन। तरल अझै पनि खनिज पानी र हर्बल चाय कुनै पनि रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै विधि पालन kefir, वजन लागि ककडी आहार, तपाईं पनि सजिलो छैन, समीक्षा तल पाउनुहुनेछ जो बारेमा। यसलाई आफ्नो आवेदन मा ट्युन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। बस यो प्रविधी तीन दिन भन्दा कुनै थप प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। अन्यथा, पेट र intestines समस्या हुन सक्छ।
आहार कसरी विविधता गर्न?
केही दिनको लागि मात्र दुई उत्पादनहरु को प्रयोग धेरै मान्छे को लागि एक अग्निपरीक्षाहरू हुन सक्छ। कि शायद जो कोहीले चाहन्छ पछि यस्तो आहार मा बस्न सहमत हुनुहुन्छ। हामी ताजा फल र तरकारी, साथै कम बोसो curds र दही यस्तो अल्प मेनु को एक किसिम प्रस्ताव। बस मात्र प्रभावकारी Kefir र ककडी वजन लागि बारेमा ज्यादातर सकारात्मक, समीक्षा जो जब हामी थप उत्पादनहरू प्रयोग आहार एउटा सानो रकम हुनेछ भन्ने सम्झना।
कसरी आहार बाहिर प्राप्त गर्न?
छैन एकाएक यो आहार प्रयोग पछि आफ्नो आहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। उन्मूलनको पछि यस्तो प्रयोग गर्न आवश्यक छ , कम क्यालोरी खाद्य पदार्थ पनीर, दही, तरकारी, ताजा फल, जडीबुटी र जस्तै। आफ्नो मेनु, सूप र अनाज porridge समावेश गर्न निश्चित हुनुहोस्। यो पाचन normalizes।
वजन लागि धेरै आहार को स्वास्थ्य हानि पुर्याउन सक्छ। तिनीहरूलाई समीक्षा तिनीहरूले सबैका लागि उपयुक्त छैनन् भन्छन्। तर वजन को यो विधि तिनीहरूलाई को एक छैन। यो तीन दिनको लागि डिजाइन गरिएको छ। जो यो भन्न प्रयास गरेका छन् महिला हराएको 2-3 किलो को रूप मा एक सजिलै देखिने प्रभाव महसुस गरे। र आहार वजन को उन्मूलनको पछि बिस्तारै टाढा भयो। यो संग मुख्य कुरा हो - जीवन को आफ्नो पूर्व बाटो फर्कन छैन। यसलाई हल्का तरकारी व्यञ्जन र ताजा फल रुचि, आफ्नो आहार निगरानी जारी गर्नुपर्छ, साथै शारीरिक सक्रिय रहन।
हामी कि वा प्रभावकारी पत्ता लगाउन प्रयास, वजन लागि kefir ककडी आहार। यसको बारेमा प्रतिक्रियाहरू बरु आशावादी, तर यसमा बस्न लामो समय को लागि सिफारिस गरिएको छैन। तर चाँडै 2-5 किलो गुमाउन हुन सक्छ यसको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
"Kaliri-KANDA": समीक्षा, वजन गर्न प्रयास गर्ने मान्छे। वजन लागि दबाइ कसरी प्रभावकारी छ?
आहार, व्यायाम, बाल, रहनसहन: अनुहार पतली कसरी बनाउने
प्रभावकारी व्यायाम कसरी चयन गर्न: ब्रड dorsi
कसरी पातलो Agibalova Irina Aleksandrovna? आहार र वजन विधि Irina Agibalova
बोसो जल ककटेल "ऊर्जा खाना": डाक्टर र समारोह को समीक्षा
सरल आहार ह्यास
बच्चाहरु संग परिवार को लागि शीर्ष क्रेते होटल
Alexei Loktev - सोभियत फिलिम तारा 60s
दूध भेडा: उपयोगी गुणहरू र क्यालोरी सामग्री। भेडाको दूधबाट उत्पादन
भाइहरूले पावल वाकर - उज्यालो melancholy हृदयले
Sinusitis के हो? sinusitis अरूलाई संक्रामक छ?